Dagaal weji gabax ku ah DF Somalia oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb (Waxa la isku hayo & wararkii u dambeeyey) | Hadalsame Media
Home Wararka Dagaal weji gabax ku ah DF Somalia oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb...
(Dhuusamareeb) 01 Luulyo 2020 – Sida naga soo gaaraysa magaalada Dhuusamareeb, dagaal muddo saacad ku dhowaad ah ka holcayey magaalada Dhuusamareeb ayaa iminka qaboobey.
Dagaalka ayaa dhex marayay Ciidamo ka wada tirsan DF Somalia, kuwaasoo lagu kala sheegay Haramacad iyo kuwa Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka, waxaana lagu joojiyey dedaallo ay sameeyeen waxgaradka degaanka oo ku baxay dagaalkan micne darrada iyo anshax xumada ah.
Waxaa ilaa haatan la xaqiijiyey inay dagaalkan ku dhaawacmeen ugu yaraan 5 ruux, kuwaasoo ay haleeshay rasaasta, waxayna iskugu jiraan ciidan iyo rayid ay ku dhacday rasaasta habowga ihi.
Dagaalkan ayaa salka ku haya ama ka bilowday muran la sheegay inuu maalmihii dambe ka taagnaa maritaanka bar koontarool oo ay fadhiyaan ciidamada Haramcad, halkaas oo dhowr jeer lagu celiyay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa NISA, sida aannu ka helnay ilo ku dhow degaanka.
Waxaa khasaaraha woxoogaa yareeyey dagaalka oo ka dhacay meel magaalada geeskeeda ah, sida uu Hadalsame u sheegay mid ka mid ah dhallinta ku nool magaalada.
Dagaalkan ayaa weji gabax ku noqonaya qiyamka ciidamada DF Somalia, kuwaasoo marar badan u dhaqma sidii mooryaan, isla markaana aan lahayn silsilad hogaamineed oo adag iyo hab-raac iyo anshax ciidan oo lagula xisaabtamo, iyadoo ay amaankii kharribayaan isla ciidankii loo xil saaray sugitaankiisa.
Kaaga darane, halka ay labada ciidan ku dagaallameen ayaa fogaan dhan 5 daqiiqo ama 1.5 KM u jirta Madaxtooyada Galmudug. Hoos ka eeg:
Next articleDHEGEYSO: Sweden oo soo bandhigtay fursado QAALI ah oo shaqooyin lagu heli karo (Ka faa’iidayso)